Hello Nepal News » बिल्बाओसँग हारेर शीर्ष स्थान धरापमा परेपछि बार्सिलोनालाई सिमोनीको यस्तो सन्देश
बिल्बाओसँग हारेर शीर्ष स्थान धरापमा परेपछि बार्सिलोनालाई सिमोनीको यस्तो सन्देश
एजेन्सी, वैशाख १३
स्पेनिस ला लिगा फुटबलको उपाधि होड निर्णायक मोडतर्फ पुग्दै गर्दा गत राति बार्सिलोनाले आफ्नो ३२औं साताको खेलमा १० खेलाडीमा सीमित भिल्लारियललाई उसकै घरेलु मैदानमा १–२ ले हरायो । हालकै अवस्थामा उपाधि होडमा सबैभन्दा सुविधाजनक अवस्थामा रहेको बार्सिलोनाका लागि यो जित उपाधितर्फ अघि बढ्न निकै महत्त्वपूर्ण भयो । उपाधिमा दाबेदारी थप बढाउन र शीर्ष स्थानको टोलीमाथि प्रत्यक्ष दबाब बढाउन बार्सिलोना कुनै पनि हालतमा यो खेल जित्न चाहन्थ्यो । उसले ३ अंक प्राप्त गरेर पनि छाड्यो ।
यता, गत राति लिग लिडर एथ्लेटिको मड्रिड भने आफ्नो ३३औं साताको खेलमा एथ्लेटिक बिल्बाओसँग २–१ ले पराजित भयो । जितको चर्को दबाबबीच रहेको एथ्लेटिको अवे मैदानमा पराजित हुँदा उसको शीर्ष स्थान धरापमा परेको छ । उसको यो हार बार्सिलोनालाई अब शीर्ष स्थानमा उक्लिन लिस्नोसरह भएको छ । किनभने, अब बार्सिलोनाले खेल्न बाँकी एक खेल जितेको अवस्थामा बार्सिलोना समान खेलपछि स्पष्ट १ अंकको अग्रतासहित लिगको सिरानमा चढ्नेछ ।
एथ्लेटिको गत राति हारे पनि ताजा अवस्थामा ३३ खेलपछि पोइन्ट टेबलमा ७३ अंकसहित शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ । रियल मड्रिड ३३ खेलपछि ७१ अंकका साथ दोस्रो स्थानमा छ । बार्सिलोनाको पनि समान ७१ नै अंक छ । ऊ तेस्रो स्थानमा छ । तर, बार्सिलोनाले एथ्लेटिको र रियलको भन्दा एक खेल कम खेलेको छ । यदि बाँकी खेल जिते बार्सिलोनाले रियललाई ३ अंक र एथ्लेटिकोलाई १ अंकले पछि पारेर शीर्ष स्थानमा उक्लिनेछ ।
गत राति अवे मैदानमा बिल्बाओसँग पराजित भएपछि एथ्लेटिकोका प्रशिक्षक डिएगो सिमोनीले आगामी खेलहरूबारे धारणा राखेका छन् । खेलपछि निकै निराश मुद्रामा प्रस्तुत भएका उनले आफूहरू सहज अवस्थाबाट गम्भीर अवस्थामा आइपुगेको बताउँदै बाँकी खेलमा आफूहरूले सावधानी अपनाउने बताएका छन् । ‘हामीले आजको खेल जित्न नसक्दा समस्या सुरु भएको छ । कुनैबेला हामी १२–१३ अंकले लिड गरिरहेका थियौं । तर, आज हामीले त्यो सबै अंक गुमाइसकेका छौं । अवश्य पनि, यो चिन्ताजनक समय हो,’ सिमोनीले भने, ‘अब हामीले उच्च सावधानी अपनाउने बेला आएको छ ।’
ला लिगा जित्नका लागि आफूहरूसँग अब धेरै एक मात्रै विकल्प रहेको सिमोनीले बताएका छन् । त्यो भनेको एक सातापछि हुने बार्सिलोनासँगको खेल जित्नु हो । यो खेल स्पष्ट रूपमा जित्न सके मात्रै एथ्लेटिको उपाधि होडमा रहन्छ । र, सँगै बाँकी सबै खेल पनि जित्नुपर्छ । ‘अब हामीसँग लिग जित्न एक मात्रै विकल्प छ– बार्सिलोनासँगको खेलमा स्पष्ट जित । यो खेल हाम्रा लागि फाइनलसरह हो । यदि हामीले यो खेल जित्न सकेनौं भने हाम्रा हातबाट लिग जान्छ । मलाई विश्वास छ, हामी यो खेल जितेर अघि बढ्नेछौं ।’
सिमोनी अझै लिगमा आफूहरू सहित बार्सिलोना र रियल मड्रिडले कम्तीमा ५ खेल खेल्न बाँकी रहेकाले यी खेलमा जस्तो पनि नतिजा आउन सक्ने बताउँछन् । ‘अझै सबै टिमले कम्तीमा ५ खेल खेल्न बाँकी छ । यी खेलमा जस्तो पनि नतिजा आउन सक्छ । टप–३ का सबै टिमले अझै पनि लिग जित्न सक्ने अवस्था छ । मलाई लाग्छ, यसपटक अन्तिम खेलसम्म प्रतिस्पर्धा रहनेछ,’ सिमोनीले भने ।
हालको अवस्था हेर्ने हो भने उपाधि होडमा प्रत्यक्ष रूपमा एथ्लेटिको र बार्सिलोना रहेका छन् । रियल मड्रिड स्पष्ट दौडमा अब छैन । उसले आफ्ना सबै खेल जित्दै बार्सिलोना र एथ्लेटिकोको नतिजामा भर पर्नुपर्छ । यो त भाग्यभरोसा हो । तर, बार्सिलोना र एथ्लेटिको दुवैका हकमा भने ला लिगा खुला छ । उनीहरूको आफ्नै हातमा छ । यो स्थितिमा बार्सिलोना र एथ्लेटिकोबीच आगामी मे ८ तारिखमा हुने खेलमाथि नै अहिले धेरैको नजर छ । यदि बार्सिलोनाले यो खेलमा बराबरी मात्रै गरेर बाँकी सबै खेल जिते उसलाई उपाधि जित्न काफी हुन्छ ।
तर, एथ्लेटिकोलाई भने बार्सिलोनासँगको खेल स्पष्ट रूपमा जितेर मात्रै पुग्दैन, बार्सिलोनाले बाँकी खेलबाट अंक नगुमाउँदासम्म आफ्ना हरेक खेल जित्नुपर्ने हुन्छ । मे ८ तारिखमा बार्सिलोना र एथ्लेटिको सिजनको दोस्रो खेलमा खेल्नुअघि नै बार्सिलोनाले आफ्नो बाँकी खेल ग्रानाडासँग अप्रिल २९ तारिखमा खेल्नेछ । सो खेल जितेको अवस्थामा बार्सिलोना एथ्लेटिकोसँग खेल्नुअघि नै लिगको शीर्ष स्थानमा चढ्नेछ । यता, रियलका लागि त अवस्था बहुत कठिन छ । उसले उपाधि जित्न अब बाँकी आफ्ना ५ खेल जितेर मात्रै पुग्दैन, एथ्लेटिकोले बार्सिलोनालाई हराउनुपर्छ । र, त्यही एथ्लेटिकोले बाँकी खेलबाट ५ अंक गुमाउनुपर्छ ।
बार्सिलोनाका आगामी खेलहरू:–
१. बार्सिलोना भर्सेस ग्रानाडा
२. भ्यालेन्सिया भर्सेस बार्सिलोना
३. बार्सिलोना भर्सेस एथ्लेटिको मड्रिड
४. लेभान्टे भर्सेस बार्सिलोना
५. बार्सिलोना भर्सेस सेल्टा भिगो
६. एइबार भर्सेस बार्सिलोना
एथ्लेटिको मड्रिडका आगामी खेलहरू:–
१. इल्चे भर्सेस एथ्लेटिको मड्रिड
२. बार्सिलोना भर्सेस एथ्लेटिको मड्रिड
३. एथ्लेटिको मड्रिड भर्सेस रियल सोसिडाड
४. एथ्लेटिको मड्रिड भर्सेस ओसासुना
५. भाल्लाडोलिड भर्सेस एथ्लेटिको मड्रिड
प्रकाशित मिति १३ बैशाख २०७८, सोमबार १०:१९